RIKOODHADII laga diiwaan barbarihii kooxaha Man United iyo Liverpool ee Premier League – Gool FM
PSG oo kula dagaalameysa kooxaha waaweyn ee England saxiixa mid ka mid ah xidigaha Juventus
Álvaro Arbeloa oo faalo ka bixiyay dib ugu laabashada Zidane ee kooxda Real Madrid
Carragher oo ka warbixiyay sababaha ay u adag tahay in Klopp uu u dhaqaaqo kooxda Bayern Munich
“Ronaldo iyo Messi oo kale 100-kii sano hal mar ayay dhashaan”
Paris Saint-Germain oo dalab waali ah ku raadineysa Toni Kroos
Ibrahimovic oo weerar culus ku qaaday jiilkii ku hareereysnaa Ferguson, si uu u difaaco Paul Pogba
Mata oo rajeeyay in Messi aysan noqon maalintiisa kulanka ay kaga hor imaan doonaan tartanka Champions League
KAAF IYO KALA DHEERI: Messi oo Boorka ku reebay Ronaldo iyo xarfaanta kale ee ugu Shidan Yurub….(Bal arag Tiro-koob Cusub oo la soo saaray)
RIKOODHADII laga diiwaan barbarihii kooxaha Man United iyo Liverpool ee Premier League
Haaruun January 15, 2017
(Manchester) 15 Janaayo 2017 – Kooxaha Man United iyo Liverpool ayaa barbaro 1-1 ku galay garoonka Old Trafford kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa goolka la horreysay waxaana rigoore u dhaliyey qeybtii hore James Milner, laakiin Zlatan Ibrahimovic ayaa goolka barbaraha u dhaliyey Man United goordambe.
Waa kulankii labaad ee Premier League oo Man United iyo Liverpool ay barbaro galaan Premier League xilli ciyaareedkan.
>- James Milner ayaysan kooxdiisu marnaba guuldarro soo gaaray kulan Premier League, isagoo gool u dhaliyey 46 kulan, marka uu gool dhaliyo waxa ay kooxdiisu guuleysatay 37 kulan, waxaana ay barbaro gashay 9 kulan, isagoo rikoodhkaas kula biiray Darius Vassell.
>- Zlatan Ibrahimovic wuxuu dhaliyay 14 gool 20-kiisii kulan ee EPL ee ugu horreeyay, taas oo la mid ah goolashii ay dhaliyeen Alan Shearer iyo Sergio Aguero markii xilligaas oo kale ay taagnaayeen.
>- Waa markii ugu horreysay oo Man United iyo Liverpool ay labada kulan ee horyaalka ay ku kulmeen xilli ciyaareedka ay labaduba barbaro ku dhammaadaan tan iyo xilli ciyaareedkii 1987/88.
>- James Milner ayaa dhaliyey mid kasta oo ka mid ah 10-kii gool ku laad ama rigoore ee uu tuuray horyaalka Premier League.
>- Kani waxa uu ahaa kulankii 50-aad ee Premier League ku dhexmara kooxaha Manchester United iyo Liverpool, Man United ayaa badisay 27 kulan, waxa ay barbaro galeen 10 kulan, waxaana laga badiyey 13 kulan.
>- Wayne Rooney waa ciyaaryahankii 17-aad ee 450 kulan safta horyaalka Premier League.
>- Kooxda Manchester United ayaa hal kulan kaliya guuldarro la kulantay 29-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku ciyaartay garoonka Old Trafford tartammada oo dhan, waxa ay mudadaas barbaro galeen 8 kulan, waxaana ay dhaliyey 59 gool.
Jurgen Klopp oo ku eedeeyay Man United ciyaar xumo kadib barbarihii ay wadagaleen
AFCON 2017: Xulka Senegal oo guul ka gaaray Tunisia, Sadio Mane oo kaalin mug leh ka qaatay in xulkiisu guushii ugu horreysay ka soo hooyo koobkan
Álvaro Arbeloa oo faalo ka bixiyay dib ugu laabashada Zidane ee kooxda Real Madrid https://t.co/ZhJqweq8dv
Carragher oo ka warbixiyay sababaha ay u adag tahay in Klopp uu u dhaqaaqo kooxda Bayern Munich https://t.co/MdkhfhSpF5
“Ronaldo iyo Messi oo kale 100-kii sano hal mar ayay dhashaan” https://t.co/ERXhBGlaeM